Shira filannoo fi ABO irratti mootummaan dalagaa jiru – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooShira filannoo fi ABO irratti mootummaan dalagaa jiru
Yeroo dhiyoo asitti mootummaan Itoophiyaa kan Dr Abiy Ahimediin hogganamu bifa haaraan ABO fi mormitoota kaan irratti shira xaxaa jira. Shirri kun:
1. ABO irratti duula maqa-balleessii haaraa banuun sochii dhaabichaa ugguruu.
Akkuma Perezedaantiin mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaafi hogganoonni mootummaa biroo gabaasa raawwii hojii Caffee Oromiyaaf dhiyeessan irratti dubbatan “miila tokkoon ala, miila tokkoon keessa godhatanii socho’uun hin danda’amu” jedhanii dubbatan sanatti godinootaafi caasaa mootummaa hundatti waan kana facaasanii akka ABOn sochii karaa nagaa hin taasifne dhorkuuf hojjechaa jiru. Akka isaan ibsanitti ABOn karaa tokko nagaan socho’aa karaa biroo ammoo waraana sochoosaa jira akka jechuuti. Tooftaa kana fayyadamanii sochii ABOn taasisaa jiru kan akka waajjira banuufi hawaasa mariisisuu akkasumas caasaa ofii diriirfachuu dhorkuuf karoora baafatanii hojiitti jiru.
2. Waraqaa eenyummaa loogiidhaan kennuu.
Filannoo irratti hirmaachuu kan danda’u nama umuriin isaa 18 ol ta’e fi lammii biyya kanaa ta’ee waraqaa eenyummaa (ibsituu eenyummaa nama sanaa) kan qabudha. Mootummaan kun gama kanaan karoora inni qabu waraqaan eenyummaa kun namoota isaaf amanamoo ta’aniifi deeggartoota isaa ta’aniif akka kennamu taasisuuf jira. As keessatti guutummaatti miseensota paartii mormituu dhorkata utuu hin taane, deegghartoota paartii mormituuf haga xiqqoo ykn muraasa kenna. Sanayyu namoota dhaaba isaanii irratti ejjennoo jabaataa hin qabneefi namoota haalonni xixiqqoon dogoggorsuu danda’aniif kennee miidiyaafi siyaasaaf itti fayyadama. Kunis paartiin dorgomaa filannoo kanaan mo’atee mootummaa ijaaruu akka hin dandeenyetti karoorfameeti kennama.
3. Hidhaa jabeessuu
Dr Abiy yeroo Adaamaatti hogganoonni paartii PP guyyaa 17 leenji’aa turan dhuma irratti deemee haasaa taasise keessatti “kana booda madaalliin kaabinootaafi hogganoota keenyaa miseensa paartii mormituu hagamii akka hidhaniifi hiisisaniin ta’a” jedhee ture. Kaabinoonni mootummaa kanaa dhaadannoon isaanii “mormitoonni reeffa keenyarra tarkaanfatanii aangoo qabatu” kan jedhudha. Kanaanis:
Namoota hidhanii haga filannoon darbutti tursiisuu
Miseensota paartii mormituu kanneen ijoo ta’aniifi hojii dhaabaa adda durummaan hojjetan gara laafinaafi seera qabeessummaa tokko malee mana hidhaatti guuruu.
Sadarkaa jalqabaatti karoorri isaanii miseensota paartii mormituu hidhuudha. Keessumaa ABO irratti xiyyeeffannaan guddaan kennamee jira.
Sadarkaan lammataa Waraana Bilisummaa Oromoo bosonatti ittisuudha. Waraana kana deemanii loluu caalaa akka waraanichi hin sochoone humna qabaniin karaa itti cufanii bosonatti eeguudha.
Tooftaa technology fayyadamanii namoota miseensota ABO ta’an hordofuu. Akka odeessi qabatamaan ibsutti haga ammaatti Baakkoofi Buraayyuu gidduutti namoota hedduu leenjisanii bobbaasuun hojii kana eegalanii jiru.
4. Karoora waggaa 10 bulchuu baafachuu
Kana milkeessuuf Naannoo hunda keessatti tooftaa adda addaa dhimma ba’aa jiru.
Karaa Tigiraay mootummaa Ertiraa waliin waliif galanii shira adda addaa xaxaa jiru.
Kibba irratti gaaffii warra sidaamaafi kaan ukkaamsee filannoo kana bira darbuuf Dr Abiy “gaaffiin hiree murteeffannaa keessan isiniif kabajama, garuummoo gaaffii keessan deebisuudhaaf heera biyya kanaa keessaa waan fooyyessinutu jira waan ta’eef, sana gochuuf ammoo filannoon biyyaalessaa kun haa xumuramu nuuf obsaa!” jechuudhaan shira xaxaa jira.
Warra Somaalee ammoo “yoo gaaffii referendum (hiree murteeffannaa) kaastan lafa buti Booranarraa fuunee isiniif laanne deebiftanii lafa keessan duriitti deebitu” jechuudhaan doorsisaa jira. Mootummaan kun eela 9 Booranni qabu keessaa lama Somaaleef laachuun isaa ni yaadatama.
Karaa Amaaraammoo silas kaayyoon Dr Abiy kan warra Amaaraa waliin tokkuma waan ta’eef isaan ejjennoo isaa kana ni deeggaru.
Hogganoonni Amaaraa tibba kana kan isaan dhaadachaa jiran “Oromoon waa’ee Finfinnee maaltu isa galchinaan dubbata; maal keessaa qaba; Finfinnee mitiiti magaalonni akka Asallaa, Adaamaa, Shaashamannee, Dirre Dhawaa, Harar, Bishooftuu, Duukamiifi kanneen biroo hedduun kan Amaaraati; lafa Oromoon nu lolee nurraa fudhate ni deebifanna” jechuudhaani. Kanaa kan dubbatan Dr Abiy abdataniiti.
5. Oromiyaa guutuu waraanaan bulchuu
Magaalaafi baadiyyaa keessatti maqaa sabummaa, amantiifi ilaalcha siyaasaan ofumaa mootummaan rakkoo uumee maqaa nagaa eegsisuu jedhuun humna waraanaa qubsiisee waraanaan bulchuuf hojjechaa jiru.
Magaalota keessatti humna haaraa hidhachiisee galchuun rakkoo uumee bakka saana waraana isaa qubsiifachuu
Maqaa ilaalcha siyaasaatiin lola kaasisee bakka sanatti paartiin mormituu sochii akka hin taasifne dhorkuudha.